ကင်ဆာကုသမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားတော်လှန်ရေး - သတင်း Rule
အောင်မြင်မှုများချုပ်လူနာ '' ကိုယ်ပိုင်ခုခံအားစနစ်များမြင်းသရိုက်အနာပေါ်ဇီဝအမှတ်အသားများကိုတိုကျခိုကျဖို့ရာတစ်လက်ကိုယ်ပိုင်ကုသခွင့်ပြုနိုင်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ကင်ဆာအကျိတ်မျိုးရိုးဗီဇဖြစ်နိုင်သောကုသမှုတော်လှန်ရေးထုတ်ဖေါ်” Ian ကနမူနာသိပ္ပံအယ်ဒီတာကရေးသားခဲ့သည်, သောကြာနေ့ 4th မတ်လအပေါ်အဆိုပါဂါးဒီးယန်းများအတွက် 2016 07.08 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
မြင်းသရိုက်အနာ၏မျိုးဗီဇမိတ်ကပ်သို့တစ်မှတ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကင်ဆာအပေါ်စစ်အတွက်သစ်တစ်ခုရှေ့တွင်ဖွင့်ရန်အလားအလာရှိပါတယ်, တစ်ဦးချင်းစီလူနာ လိုက်. ဖြစ်ကြောင်းတစ်လက်ကုထုံးပို့ဆောင်, သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောဆိုကြပြီ.
အဆိုပါအောင်မြင်မှုများကင်ဆာကြီးထွားပင်အဖြစ်တွေ့ရှိနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့ပျံ့နှံ့သောအဆုတ်များနှင့်အသားအရေကင်ဆာများ၏မျိုးရိုးဗီဇရှုပ်ထွေးသို့သုတေသနလုပ်ငန်းမှလာ, ထိုသူတို့နှင့်အတူအကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကတိုကျခိုကျဖို့ရစေတယ်နိုင်ဇီဝ "အလံ" ၏နံပါတ်သယ်.
ထိုအလံကြောင့်,, မျက်နှာပြင်ပရိုတိန်းအဖြစ်ပေါ်လာရာ, သာကင်ဆာဆဲလ်များတွင်တွေ့နေကြပါတယ်, သူတို့သိပ္ပံပညာရှင်များကင်ဆာတိုက်ဖျက်ဖို့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏တန်ခိုးအပေါ်ဆွဲအသစ်ကုထုံးအတွက် "လက်ရာမြောက်သောပစ်မှတ်" အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သောအရာကိုပေး.
Related: ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်: ကင်ဆာရောဂါကုသမှုကြီးစွာသောသစ်ကိုမျှော်လင့်ချက်
ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကအသုံးချကြောင်းကုသမှုကင်ဆာရောဂါအချို့ကိုပုံစံများကိုဆန့်ကျင်ကြီးမြတ်ဂတိတော်ကိုပြကြပြီ, ထိုကဲ့သို့သော melanoma လည်းအဖြစ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူတိုင်းအလုပ်လုပ်ကြပါဘူး.
တစျခုခဉျြးကပျရောဂါပြီးစနစ်ကပေါ်ဘရိတ်ဖြန့်ချိ, လူသတ်သမား T ကဆဲလ်တွေကိုအပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့ unleashing, အရာမဟုတ်ရင်ကင်ဆာဆဲလ်များကဆငျးသကျမှေးမှိန်နေသည်ပာုနေကြတယ်. ဒါပေမယ့်အလုပ်, လူနာရဲ့ရောဂါပြီးစနစ်ကိုပထမဦးဆုံးရန်သူကဲ့သို့ကင်ဆာအသိအမှတ်ပြုရမည်.
ချားလ်စ် Swanton, လန်ဒန်ရှိ Francis က Crick Institute မှမှာနောက်ဆုံးပေါ်လေ့လာမှုကိုဦးဆောင်သူအကင်ဆာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တခုတခုအပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သူ, တစ်ဦးလူနာရဲ့ကင်ဆာဆဲလ်အားလုံးအားဖြင့်မျှဝေမျက်နှာပြင်ပရိုတိန်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပစ်မှတ်ထားဖို့အနာဂတ်ကုထုံးတစ်ခု "achilles ဖနောင့်" ထောက်ပံ့ပြောပါတယ်.
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့, ဟားဗတ်ကနေပါဝငျသောသိပ္ပံပညာရှင်များ, မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် University College London မှ, သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက်လူနာပြီးသားသူတို့ရဲ့ကင်ဆာဆန့်ကျင်ခုခံအားတုံ့ပြန်မှုတွေစတင်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ. သို့သော်ထိုတိုက်ခိုက်မှုများသည်ကင်ဆာဆဲလ်များကိုဖျက်ဆီးဖို့လည်းအားလျော့ခဲ့ကြ. မြင်းသရိုက်၏ရင်းနှီးသောစစ်ဆေးရေးသူတို့ကိုအတွင်း၌သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံခုခံအားဆဲလ်ထင်ရှား: အချို့သောကင်ဆာရဲ့ထူးခြားတဲ့အလံအသိအမှတ်ပြုခဲ့, ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုရှီယာသို့မဟုတ်ကင်ဆာရဲ့ကာကွယ်ရေးအားဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြ.
"ဘာကျနော်တို့ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကိုတွေ့ဖူးတဲ့မြင်းသရိုက်အနာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖျက်ဆီးခြင်း၏အစေ့ကိုကြဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်. ထိုမြင်းသရိုက်အနာအတွင်း, ခပ်သိမ်းသောအကျိတ်ဆဲလ်ရှိသောအလံအသိအမှတ်မပြုကြောင်းခုခံအားဆဲလ်တွေရှိပါတယ်,"Swanton ကပြောပါတယ်.
မြင်းသရိုက်အနာကြီးလာတာနဲ့အမျှ, သူတို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ. အချိန်ပို, ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေအ DNA ကို scramble, နှင့်အကျိတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအခြားရန်အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ကွညျ့ဖို့စတင်သည်. သို့သော် Swanton ပင်ရှုပ်ထွေးပြီးအကျိတ်ဆဲလ်များကို၎င်းတို့၏ဇစ်မြစ်၏ထူးခြားချက်သည်းခံနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိ. ဂျာနယ်ထဲမှာရေးသားခြင်း, သိပ္ပံ, သူကိုဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်, နှစ်ဦးအဆုတ်ကင်ဆာလူနာအတွက်, မျက်နှာပြင်ပရိုတိန်းအစောပိုင်းအပေါ် mutated နှင့်မြင်းသရိုက်အနာတစ်လျှောက်လုံးထင်ရှား.
အလုပ်, ကင်ဆာသုတေသနဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် Rosetrees မဲ့ကိုးစားလော့အားဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့, အနာဂတ်ကင်ဆာလူနာတွေကိုကုသနှစ်ခုဖြစ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းများပေါ်ပေါက်. တဦးတည်းဇာတ်လမ်းထဲမှာ, ဆရာဝန်တွေဟာလူနာရဲ့အကျိတ်ကနေ biopsy ယူနိုင်, သူ့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇဖတ်နှင့်ကင်ဆာဆဲလ်အားလုံးအပေါ်ပစ္စုပ္ပန်နေသောအလံထွက်အလုပ်လုပ်. ထိုအလံအသိအမှတ်မပြုသောအကျိတ်အတွင်း၌ခုခံအားဆဲလ်တှေ့လြှငျ, သူတို့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာများပြားစေနိုင်, ထို့နောက်လူနာသို့ re-ထုံမွှန်း, ကင်ဆာဆဲလ်များအပေါ်တစ်ဦးလွှမ်းမိုးတိကျစွာတိုက်ခိုက်ထုတ်လုပ်. အခြားဇာတ်လမ်းထဲမှာ, မိမိတို့ကိုယ်ကိုကင်ဆာဆန့်ကျင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးလုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်ပရိုတိန်းအလံ. ကိုယျခန်ဓာသို့သူတို့ကိုငါထိုးသွင်း, နှင့်ခုခံအားဆဲလ်ကျူးကျော်အဖြစ်သူတို့ကိုဖော်ထုတ်ပြီးတစ်ဦးတိုက်ခိုက်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့. အလေ့အကျင့်အတွက်, သစ်ကုထုံး T ကဆဲလ် neutralizing ကင်ဆာရပ်တန့်က "စစ်ဆေးရေးဂိတ် inhibitors" ဟုခေါ်လက်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအသုံးပြုရရန်ရှိသည်မယ်လို့.
Swanton, အဘယ်သူ၏လေ့လာမှုထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် သိပ္ပံ, လာမည့်နှစ်ဦးမှသုံးနှစ်များတွင်အဆုတ်ကင်ဆာလူနာအတွက်ပထမဦးဆုံးလူ့ရုံးတင်စစ်ဆေးဖွင့်ဖို့မျှော်လင့်. ဒီရောဂါဗြိတိန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးကင်ဆာလူသတ်သမားသည်, ဟုဆိုကာထက်ပို 35,000 တစ်နှစ်ကိုအသက်ရှင်တော်မူသည်. ဒါဟာကုသမှုအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိမသိရသေးပါ, ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကတစ်ကျိတ်ပေါ်မျိုးစုံအလံပစ်မှတ်ထားလျှင်ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ယုံကြည်. "ကျနော်တို့ကဒီလူနာစောင့်ရှောက်မှုအပေါ် impact နိုငျသောသက်သေပြကြပြီမဟုတ်. အဘယျသို့ကျွန်တော်ပြပြီအသီးအသီးလူနာရဲ့အကျိတ်အတွင်းအလားအလာပစ္စုပ္ပန်ထူးခြားသောကုထုံးရှိပါတယ်ကြောင်း,"Swanton ကပြောပါတယ်. "ဒီက၎င်း၏အကြွင်းမဲ့အာဏာန့်သတ်ချက်မှကိုယ်ပိုင်ဆေးဝါးယူပြီးရှိ၏။ "
အဆိုပါကုသမှု, ဒါကြောင့်မှာအားလုံးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်, ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးရှိသည်သောကင်ဆာအတွက်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်, ထိုကဲ့သို့သော melanoma လည်းများနှင့်ဆေးလိပ်-related အဆုတ်ကင်ဆာအဖြစ်. သို့သော်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကြောင့်လျော့နည်း mutation ကင်ဆာဆန့်ကျင်ထိရောက်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နောက်ထပ်သုတေသနလုပ်ငန်းစီစဉ်, ထိုကဲ့သို့သောဆီးအိမ်အဖြစ်, ဆီးကျိတ်နှင့်ပန်ကရိယကင်ဆာ. Swanton လုပ်ထုံးလုပ်နည်း costed မမူ, ဒါပေမယ့်စျေးပေါဖြစ်မဝန်ခံ.
ဒါဝိဒ်သည်အဒမ်, အ Wellcome Trust မှဆန်းဂါးဆို Institute မှမှာကင်ဆာ geneticist, သုတေသနဆရာဝန်များကကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကအမြတ်ထုတ်အသစ်ကုထုံးမှအကြိုးအမြားဆုံးဖွယ်ရှိသည်အဘယ်သူသည်အထဲကအလုပ်လုပ်ကူညီနိုင်ကပြောပါတယ်. "ဤအသိပညာ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအသုံးကု သ. ဖြစ်အများဆုံးဖွယ်ရှိနေသောလူနာထွက်အလုပ်လုပ်၌ရှိ၏,"ဟုသူကဆိုသည်. "ဒီ immunotherapies နှင့်အတူအဆိုပါကိစ္စကိုသူတို့အလွန်စျေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တုံ့ပွနျကွသူမမည်သူမသိရပါဘူးဖြစ်၏။ "
ဒါပေမဲ့သူတစ်ဦးကုထုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အလားအလာရှင်းပါတယ်ခင်မှာနောက်ထပ်လူနာလေ့လာခံရဖို့ရှိသည်ဟုဆိုသည်. "ဒီမှာအဆိုပါအခွင့်အလမ်း trunkal အလံနှင့်အတူတုံ့ပြန်ကြောင်းကင်ဆာအတွင်း T-ဆဲလ်တွေခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်မှဖြစ်ပါသည်, ယဉ်ကျေးမှုတွင်ဤသည် T-ဆဲလ်တွေချဲ့ထွင်ရန်, နှင့်လူနာရဲ့အကျိတ်ပစ်မှတ်ထားပြန်လူနာသို့, ဤဆဲလ်တွေပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေး. ဤသည်ကိုယ်ပိုင်ကုထုံး၏ယုဂျဖြစ်ပါသည်,"ဟုသူကဆိုသည်.
"ဒီအလုပ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းပေါ်မှာ right ဖြစ်ပါသည်. နောက်တစ်နေ့အဆင့်ပိုကြီးအလိုက်ဖို့ချဉ်းကပ်မှုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်အသုံးပြုရလိမ့်မည်,"ဟုသူကဆက်ပြောသည်.
32145	3 အပိုဒ်, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်မော်လီကျူးဆိုင်ရာဇီဝဗေဒ, ကင်ဆာ, ကျန်းမာခြင်း, မှ Ian နမူနာ, ရောဂါပြီးပညာ, အဓိကအပိုင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ, သတင်း, သိပ္ပံ, အုပ်ထိန်းသူ, ဗြိတိန်သတင်း
← အပြာရောင် Lola နားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 10 အဆိပ်အပြင်းဆုံးမြွေ [Listverse] →